13 Dec 2017 . 4:18 PM
အရောင်တွေမှာ အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုးဆီရှိပါတယ်။ အရောင်တွေကပဲ လူတွေရဲ့ အသွင်ပုံစံနဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကိုဖော်ပြစေတယ်။ စိတ်ရဲ့ ခံစားချက်ကိုပြောင်းလဲစေပါတယ်။ ပန်းရောင်ကြိုက်တတ်တဲ့သူဟာ စိတ်ထားနူးညံ့တယ် ပျော့ပြောင်းတယ်။ အဖြူရောင်ကြိုက်တတ်တဲ့သူဟာ တည်ကြည်တယ် ရိုးသားတယ် အစရှိသဖြင့် ကွဲပြားကြတယ်။
အရောင်တွေရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ စွမ်းအားကြောင့် ကိုယ့် အိပ်ခန်းတွေမှာ စိတ်ကို အေးချမ်းစေမယ့်အရောင်မျိုး၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာကို လျော့ကျစေမယ့် အရောင်တို့နဲ့ အလှဆင်ယ်။ စိတ်ကုထုံးတစ်မျိုးလို့ဆိုလို့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုအရောင်မျိုးတွေက အိပ်ခန်းတွေမှာ အလှဆင်သင့်လဲဆိုရင်…
၁။ Dark Gray-Blue
ခဲပြာရင့်ရောင်က စိတ်ကိုအေးချမ်းစေတဲ့အပြာရောင်နဲ့ စိတ်ကို ငြိမ်သက်စေတဲ့ ခဲရောင်လေးနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အတွက် စိတ်ကို နားနားနေနေဖြစ်စေအောင် ပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျား၊ မ မရွေးလိုက်ဖက်တဲ့ အရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ ခဲပြာရင့်ရောင်လေးက နေ့အလင်းရောင်ရော ညအလင်းရောင်မှာပါ အရောင်ထွက်လှတဲ့ ကာလာလေးဖြစ်ပါတယ်။ ကာလာလွင်လွင်လေးတွေမကြိုက်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် ဆိုရင်တော့ အိပ်ခန်းအလှဆင်ဖို့အတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
၂။ Light Green
အစိမ်းနုရောင်လေးက စိတ်ကို လန်းဆန်းစေတယ်။ အသစ်တစ်ဖန်ပြန်လည် အားဖြည့်ပေးတဲ့ခံစားမှုကိုပေးတယ်။ နေဓာတ်အစား အအေးဓာတ်ကို စုတ်တဲ့ကာလာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်တော်တော်များများနဲ့ Minimalist တွေ အတော်အများကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ကာလာလေးဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်နေစိတ်ထား ရိုးရှင်းတဲ့သူတွေ အကြိုက်များတဲ့ ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေလျော့ကျစေပြီး ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးတဲ့ ခံစားမှုကိုရချင်တဲ့သူတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးကာလာဖြစ်ပါတယ်။
ပန်းနုရောင်ကတော့ ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်၊ ကဗျာဆန်တယ်။ ပန်းနုရောင်ကို အိပ်ခန်းအလှဆင်ခြင်းအားဖြင့် စိတ်ခံစားမှုဟာ အမြဲတမ်း လန်းဆန်းတက်ကြွနေမယ်။ အမြဲတမ်းကြည်နူးပြီး ပျော်ရွင်တဲ့ခံစားမှုမျိုးကို ရရှိစေလိမ့်မှာပါ။ မွေးကင်းစ ကလေးတွေအတွက်သင့်တော်ပြီး ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးတွေအတွက်လည်း သင့်တော်သလို မင်္ဂလာအိပ်ခန်းတွေအတွက်လည်းသင့်တော်တဲ့ ကာလာလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
၄။ Cream Color
Cream Color က စိတ်ကို ငြိမ်သက်စေတယ်။ နွေးထွေးစေတဲ့ ခံစားမှုကိုပေးတယ်။ သဘာဝရဲ့ အခြေခံကာလာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီး အေးချမ်းတဲ့အိမ်တစ်အိမ်တည်းမှာ မိသားစုနဲ့ အတူတူ လုံလုံခြုံခြုံနေရတဲ့ ခံစားမှုမျိုးကိုပေးပါတယ်။ Foreign ဘက် နဲ့ အိမ်တွင်းအလှဆင်တဲ့အခါမှာ အသုံးများတဲ့ ကာလာလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်အနုအရွတွေမကြိုက်တတ်တဲ့ တစ်ကိုယ်တည်းသမားတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးကာလာလေးဖြစ်ပါတယ်။
ဗေဒါရောင်လေးကတော့ ကဗျာဆန်တဲ့ကာလာလေးဖြစ်တဲ့အတွက် မိန်းကလေးတွေ အသည်းစွဲ အိပ်ခန်းအလှဆင်ကာလာလေးဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ စိတ်ကို သိမ်မွေ့တဲ့ ခံစားချက်ကိုပေးတယ်။ ဗေဒါပန်းအရောင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက် အခန်းထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ ပန်းခင်းထဲရောက်သွားသလိုခံစားရစေပါတယ်။ ကဗျာဆန်တတ်တဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် မဖြစ်မနေ အလှဆင်သင့်တဲ့ အရောင်လေးပါ။
အိပ်ခန်းအတွင်းအလှဆင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ပင်ပန်းတာတွေ လျော့ကျစေဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အရောင်နုလေးတွေ အရောင်အဖျော့လေးတွေနဲ့ အခန်းကို နံရံအလှဆင်တာအပြင် ပန်းအိုးလေးတွေထားပြီးလည်း အလှဆင်သင့်ပါတယ်။ အိမ်တွင်းစိုက် ပန်းပင်လေးတွေစိုက်တာကလည်း Oxygen ပိုရရှိတဲ့အတွက် စိတ်ကိုပိုပြီး လန်းဆန်းစေပါတယ်။
အရောငျတှမှော အဓိပ်ပါယျအမြိုးမြိုးဆီရှိပါတယျ။ အရောငျတှကေပဲ လူတှရေဲ့ အသှငျပုံစံနဲ့ စိတျခံစားခကျြကိုဖျောပွစတေယျ။ စိတျရဲ့ ခံစားခကျြကိုပွောငျးလဲစပေါတယျ။ ပနျးရောငျကွိုကျတတျတဲ့သူဟာ စိတျထားနူးညံ့တယျ ပြော့ပွောငျးတယျ။ အဖွူရောငျကွိုကျတတျတဲ့သူဟာ တညျကွညျတယျ ရိုးသားတယျ အစရှိသဖွငျ့ ကှဲပွားကွတယျ။
အရောငျတှရေဲ့ စိတျခံစားခကျြကို ပွောငျးလဲပေးနိုငျတဲ့ စှမျးအားကွောငျ့ ကိုယျ့ အိပျခနျးတှမှော စိတျကို အေးခမျြးစမေယျ့အရောငျမြိုး၊ ပငျပနျးနှမျးနယျတာကို လြော့ကစြမေယျ့ အရောငျတို့နဲ့ အလှဆငျယျ။ စိတျကုထုံးတဈမြိုးလို့ဆိုလို့ရပါတယျ။ ဘယျလိုအရောငျမြိုးတှကေ အိပျခနျးတှမှော အလှဆငျသငျ့လဲဆိုရငျ…
ခဲပွာရငျ့ရောငျက စိတျကိုအေးခမျြးစတေဲ့အပွာရောငျနဲ့ စိတျကို ငွိမျသကျစတေဲ့ ခဲရောငျလေးနဲ့ ပေါငျးစပျထားတဲ့အတှကျ စိတျကို နားနားနနေဖွေဈစအေောငျ ပွောငျးလဲပေးမှာဖွဈပါတယျ။ ကြား၊ မ မရှေးလိုကျဖကျတဲ့ အရောငျဖွဈတဲ့အတှကျ အဆငျပွပေါတယျ။ ခဲပွာရငျ့ရောငျလေးက နအေ့လငျးရောငျရော ညအလငျးရောငျမှာပါ အရောငျထှကျလှတဲ့ ကာလာလေးဖွဈပါတယျ။ ကာလာလှငျလှငျလေးတှမေကွိုကျတတျတဲ့သူတှအေတှကျ ဆိုရငျတော့ အိပျခနျးအလှဆငျဖို့အတှကျ သငျ့တျောပါတယျ။
အစိမျးနုရောငျလေးက စိတျကို လနျးဆနျးစတေယျ။ အသဈတဈဖနျပွနျလညျ အားဖွညျ့ပေးတဲ့ခံစားမှုကိုပေးတယျ။ နဓောတျအစား အအေးဓာတျကို စုတျတဲ့ကာလာလညျးဖွဈပါတယျ။ လူငယျတျောတျောမြားမြားနဲ့ Minimalist တှေ အတျောအမြားကွိုကျနှဈသကျတဲ့ ကာလာလေးဖွဈပါတယျ။ စိတျနစေိတျထား ရိုးရှငျးတဲ့သူတှေ အကွိုကျမြားတဲ့ ကာလာဖွဈတဲ့အတှကျ စိတျပငျပနျးမှုတှလြေော့ကစြပွေီး ပွနျလညျအားဖွညျ့ပေးတဲ့ ခံစားမှုကိုရခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ အသငျ့တျောဆုံးကာလာဖွဈပါတယျ။
ပနျးနုရောငျကတော့ ခဈြဖို့ကောငျးတယျ၊ ကဗြာဆနျတယျ။ ပနျးနုရောငျကို အိပျခနျးအလှဆငျခွငျးအားဖွငျ့ စိတျခံစားမှုဟာ အမွဲတမျး လနျးဆနျးတကျကွှနမေယျ။ အမွဲတမျးကွညျနူးပွီး ပြျောရှငျတဲ့ခံစားမှုမြိုးကို ရရှိစလေိမျ့မှာပါ။ မှေးကငျးစ ကလေးတှအေတှကျသငျ့တျောပွီး ဆယျကြျောသကျ မိနျးကလေးတှအေတှကျလညျး သငျ့တျောသလို မင်ျဂလာအိပျခနျးတှအေတှကျလညျးသငျ့တျောတဲ့ ကာလာလေးလညျးဖွဈပါတယျ။
Cream Color က စိတျကို ငွိမျသကျစတေယျ။ နှေးထှေးစတေဲ့ ခံစားမှုကိုပေးတယျ။ သဘာဝရဲ့ အခွခေံကာလာလညျးဖွဈတဲ့အတှကျ တိတျဆိတျငွိမျသကျပွီး အေးခမျြးတဲ့အိမျတဈအိမျတညျးမှာ မိသားစုနဲ့ အတူတူ လုံလုံခွုံခွုံနရေတဲ့ ခံစားမှုမြိုးကိုပေးပါတယျ။ Foreign ဘကျ နဲ့ အိမျတှငျးအလှဆငျတဲ့အခါမှာ အသုံးမြားတဲ့ ကာလာလေးလညျးဖွဈပါတယျ။ အရောငျအနုအရှတှမေကွိုကျတတျတဲ့ တဈကိုယျတညျးသမားတှအေတှကျ အသငျ့တျောဆုံးကာလာလေးဖွဈပါတယျ။
ဗဒေါရောငျလေးကတော့ ကဗြာဆနျတဲ့ကာလာလေးဖွဈတဲ့အတှကျ မိနျးကလေးတှေ အသညျးစှဲ အိပျခနျးအလှဆငျကာလာလေးဖွဈပါတယျ။ သူကတော့ စိတျကို သိမျမှတေဲ့ ခံစားခကျြကိုပေးတယျ။ ဗဒေါပနျးအရောငျလေးဖွဈတဲ့အတှကျ အခနျးထဲဝငျလိုကျတာနဲ့ ပနျးခငျးထဲရောကျသှားသလိုခံစားရစပေါတယျ။ ကဗြာဆနျတတျတဲ့ ပြိုမတေို့အတှကျ မဖွဈမနေ အလှဆငျသငျ့တဲ့ အရောငျလေးပါ။
အိပျခနျးအတှငျးအလှဆငျတာဖွဈတဲ့အတှကျ စိတျပငျပနျးတာတှေ လြော့ကစြဖေို့အရေးကွီးပါတယျ။ အရောငျနုလေးတှေ အရောငျအဖြော့လေးတှနေဲ့ အခနျးကို နံရံအလှဆငျတာအပွငျ ပနျးအိုးလေးတှထေားပွီးလညျး အလှဆငျသငျ့ပါတယျ။ အိမျတှငျးစိုကျ ပနျးပငျလေးတှစေိုကျတာကလညျး Oxygen ပိုရရှိတဲ့အတှကျ စိတျကိုပိုပွီး လနျးဆနျးစပေါတယျ။
မင်းသမီး Emilia Clarke ရင်ဖွင့်လာတဲ့ Brain Aneurysms နဲ့ Game of Thrones က နေ့ရက်များ
Cover Song Crazy တိုင်း နားထောင်သင့်တဲ့ Cover Song Creator များ
by Moethae Say .5hours ago
‘Call Me by Your Name’ ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲထွက်မယ်လို့ အတည်ပြုလိုက်တဲ့ Andre Aciman
Stranger Things Season3Trailer ကတော့ ကြည့်ရှုသူတွေကို မှင်သက်သွားစေမှာပါ
ခရီးသွားနေတုန်း ဖျားနာခြင်း မဖြစ်အောင် ဘယ်လို ကာကွယ်ကြမလဲ
by yoelu .9hours ago
လူအများကြား စကားပြောစွမ်းရည်ကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ